Wasiirrada arrimaha dibedda Soomaaliya, Itoobiya iyo Eretrea oo ku wajahan Jabuuti | Somali National Television - sntv.so
Home VILLA SOMALIA Wasiirrada arrimaha dibedda Soomaaliya, Itoobiya iyo Eretrea oo ku wajahan Jabuuti
Wasiirrada arrimaha dibedda Soomaaliya, Itoobiya iyo Eretrea oo ku wajahan Jabuuti
Muqdisho-(SNTV)-Wasiirrada arrimaha dibedda ee Dowladaha Soomaaliya , Itoobiya iyo Eretrea ayaa la filayaa in ay dhawaan kulan Saddex Geesood ah ku yeeshaan Magaalada Jabuuti ee Caasimadda Dalka Jabuuti.
Xog ay heshay Warbaahinta Qaranka Soomaaliyeed ayaa sheegaysa In masuuliyiintan ay ku wajahan yihiin Jabuuti, iyagoo ka wada hadli doono sidii xal waara looga gaari lahaa xurgufta dhex taalla Jabuuti iyo Eretrea.
Kulankan ay Jabuuti ku yeelanayaan Wasiirrada arrimaha dibadda ee Soomaaliya, Itoobiya iyo Eretrea ayaa waxa uu qayb ka yahay shir ay Magaalada Casmara ku yeesheen hoggaamiyeyaasha Waddamada Saddexdan Dal, kaasoo ku qotoma in la dhammeeyo mad-madoowga siyaasadeed ee ka dhex jira Waddamada Bariga Afrika, laguna beddelo nabad , horumar iyo wada noolaasho.
Previous articleDowladaha Soomaaliya,Eritrea iyo Itoobiya oo ka wada hadlay arrimaha ka dhextaagan Jabuuti iyo Eritrea.
Next articleWasiirka waxbarashada XFS oo la kulmay xubno ka tirsan midowga Yurub